Fifandraisana Internet miadana? Ireo fantsona mameno izany! | Martech Zone
Fifandraisana Internet miadana? Ireo fantsona mameno izany!
Talata, Jolay 11, 2006 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Senatera Ted Stevens, Alaska - Filohan'ny Komitin'ny Varotra Senat. Ity dia ny miresaka momba ny internet ny governemanta. Ugh. (Fanavaozana 7/13: Toerana mahafinaritra eo amin'ny Daily Show)
Misy orinasa iray izao azonao atao ny misoratra anarana ary afaka mahazo sarimihetsika alefa ao an-tranonao isan'andro amin'ny serivisy fandefasana. Okay. Ary izao dia tonga ao an-tranonao izy io, tafiditra ao anaty boaty mailaka rehefa mody ianao ary manova ny kaontinao fa mandoa izany ianao, marina. Fa ity serivisy ity dia handeha amin'ny Internet * ary ny ataonao dia ianao mandehana fotsiny amin'ny toerana iray amin'ny Internet ary manafatra ny sarimihetsikao ianao ary maminavina izay azonao hafarana folo amin'izy ireo atolotra anao ary maimaim-poana ny saram-pandefasana.
Ny folo amin'izy ireo dia mivezivezy manerana an'io internet io ary inona no mitranga amin'ny Internet anao manokana?
Vao ny andro vao azoko, internet dia nalefan'ny mpiasako tamin'ny 10 ora maraina ny zoma ary vao azoko omaly. Fa maninona? Satria nifangaro tamin'ny zavatra rehetra mandeha amin'ny Internet ara-barotra izany. Ka te hiresaka momba ny mpanjifa ve ianao? Andao hiresaka momba anao sy izaho. Mampiasa an'ity Internet ity izahay hifandraisana ary tsy hampiasainay ho an'ny tanjona ara-barotra. Tsy mahazo na inona na inona isika amin'ny alàlan'ny Internet. Tsy milaza aho izao hoe mila manao izany ianao na te hanavakavaka an'ireo olona ireo [¿] Diso ny fomba fitantanana. Ny fomba fiasao dia mifehy amin'ny heviny hoe "Tsy misy olona afaka miampanga na iza na iza noho ny fanafihana faobe an'ity tontolon'ny internet ity". Tsia, tsy vita aho. Tiako ho takatry ny olona ny toerako, tsy handany fotoana be aho. [¿]
Te hampita vaovao marobe amin'ny Internet izy ireo. Ary averiko indray, ny Internet dia tsy zavatra andefasanao zavatra fotsiny. Tsy kamio io.
Andiana fantsona io.
Ary raha tsy azonao ireo fantsona ireo dia mety fenoina ary raha feno izy ireo, rehefa apetrakao ny hafatrao, dia milahatra ary hahemotra na iza na iza mametraka ao anaty fantsona fitaovana be dia be, habetsaky ny ara-nofo.
Ankehitriny manana Internet misahana ny Departemantan'ny Fiarovana isika izao, fantatrao ve izany?
Fantatrao ve ny antony?
Satria tsy maintsy aterina avy hatrany ny azy ireo. Tsy zakan'izy ireo ny fanemoran'ny olon-kafa.
Ankehitriny mieritreritra aho fa miady hevitra ireto olona ireto raha tokony ho afaka manary izany rehetra izany amin'ny Internet izy ireo raha tokony handinika raha tokony hanana rafitra izy ireo.
Angamba misy toerana ho an'ny harato ara-barotra fa tsy mampiasa izay ampiasain'ny mpanjifa isan'andro.
Tsy ny fampiasana ny serivisy fandefasan-kafatra izay tena ilaina amin'ny orinasa madinidinika, amin'ny fiasan'ny fianakaviana.
Ny fotokevitra iray manontolo dia ny tsy tokony hidirantsika an'io raha tsy misy olona mampiseho fa misy zavatra vita izay tena fanitsakitsahana ny tsy fiandaniana izay mahavoa ahy sy ianao.
Tags: fantsona internetteknolojiaTed Stevens
Mashup Camp amin'ity herinandro ity any Mountain View, CA
Nielsen mampitaha paoma amin'ny voasary, Podcasting amin'ny bilaogy